အလုပ်ရှား တယ်။ ဒါတွေကရော ဘယ်လိုရှင်းမလဲ... နှင့်သင်္ဘောသားရင်ဖွင့်သံ (၉)... Seamen's Voice-9 ~ MSU Portal
အလုပ်ရှား တယ်။ ဒါတွေကရော ဘယ်လိုရှင်းမလဲ... နှင့်သင်္ဘောသားရင်ဖွင့်သံ (၉)... Seamen's Voice-9
5/17/2013 01:10:00 AM Navi Kyaw No comments
ဒါတွေ က ရော ဘယ်လို ရှင်း မလဲ။
ဘယ်သူ တာဝန် ယူ မှာလဲ? တာဝန် ရှိလဲ?
တစ်ကယ် ဖတ်ပြီးမှတ်ပြီး တစ်ကယ်ဖြေ အမှန် လက်မှတ် တွေ အလုပ်မရှိ။ဲ
ကိုယ်တိုင် ခံစားရတဲ့ လူ တစ်ယောက်က ဓာတ်ပုံ ပါ ပိုစ်ထား ပေးတယ်။
မသိချင် ဟန်ဆောင်တာ လား? သိသိ နဲ့ လွှတ်ပေး ထား တာ လား။ ACTION ကရော ?
ITF ကို တိုင်ရင် မြန်မာပြည် ပြန် လာ ရင် အရေး ယူမယ် ဆို တာ ဒါမျိုး ကိစ္စ ကို ပြောတာလား။
သူနှင့်မြန်မာနိုင်ငံရှိ ရွှေဇင်ရော်companyမှအေးဂျင့်ယဉ်ထွေးဆိုသူနှင့်ပေါင်းပြီးလူသစ်များကိုညာခေါ်ပြီး ဟိုမှာသူကြီးကအကိုသူငယ်ချင်း
Some Seamen's Voices...
- ဒါတွေကိုရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးကအရာရှိတွေဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးမှာလဲဗျာ ဒါတွေကဖြစ်နေတာအကြိမ်ပေါင်းမနည်းတော့ဘူး လူသစ်တွေကမြန်မာပြည်မှာအလုပ်မရှိလို့သင်္ဘောသားအလုပ်ကိုရွေးနေကြတာ ပိုက်ဆံရှိလွန်းကြလို့မဟုတ်ပါဘူး တစ်ခါတည်းနဲ့မအောင်မြင်ရင် ဦးကျိုးပြီ ဘ၀ပါပျက်ရတာမျိုးတွေပါ အရမ်းသနားဖို့ကောင်းပါတယ် ဒါတွေကိုသက်ဆိုင်ရာရေကြောင်းဝန်ကြီးဌာနက အရာရှိတွေအမြန်ဆုံးဖြေရှင်းပေးသင့်ပါတယ်
- ကျွန်တော်တို့လူသစ်တွေအတွက်က ဒီလိုပဲလားဗျာ ကူညီကြပါဦး
- This man's name is kyaw swar, previously he was RO, shintoku kiran company.
Posted in: knowledge,news,Seamen's Voice